Guild yeDungeoneering, iyo nyowani RPG inogara pane iyo App Store | IPhone nhau
Guild yeDungeoneering yakasarudzika-yakatendeuka-RPG mairi panzvimbo pekudzora gamba isu tinofanirwa kuvaka gomba rakamukomberedza. Kushandisa makadhi kubva kubato redu rekambani, tinofanira kuisa makamuri, kuratidza, misungo uye kupamba. Mutambo uchienderera mberi, gamba rinofanirwa kufunga kwekuenda uye nezvekurwisa.
chitsamba: Guild yeDungeoneering haienderane nePad Mini kana iPad 2. Pane dzimwe nguva pazvigadzirwa zvekare, mutambo uyu ungangorembera uchiratidzira chisina chinhu kekutanga painotangwa. Kugadzirisa dambudziko iri isu tinongofanirwa kusunungura inosvika mazana mana emazana ematanhatu enzvimbo pachinhu ichi.
1 Guild yeDungeoneering Zvimiro
2 Guild yeDungeoneering ruzivo
Guild yeDungeoneering Zvimiro
Turn-based kadhi RPG mutambo uine hukuru hunhu, yakasarudzika peni uye pepa mifananidzo, mimhanzi inobata uye inonakidza hurukuro.
Tora kutonga kweako rookie boka remagamba uye uvatungamirire mukukunda! (mushure mekubvuma kurasikirwa kushoma, hongu)
Tora, kurudzira uye kupa chiokomuhomwe magamba ako kuti abvise matongo aunovaka nekuisa zvine hungwaru kuisa makamuri, zvikara uye kupamba kubva kumakadhi aunazvo.
Dzidza nezve hunhu hwemagamba ako uye hunhu, kusimudzira magamba aripo, uye wedzera magamba matsva paunenge uchiedza nzira nyowani dzekuvadzivirira kuti varege kuwira mushaya dzerufu.
Tungamira boka rako nekuchenjera uye nehungwaru shandisa yako yawakawana zvakaoma "kubwinya" kukwirisa uye kuvhura mamwe makamuri nemidziyo. Nekuvandudza boka rako, iwe uchave nemukana mukuru wekubvisa matongo akaomesesa sezvaunofambira mberi nekukunda mugomba repamusoro.
Guild yeDungeoneering ruzivo
Kugadziriswa kwekupedzisira: 20-07-2016
Saizi: 329 MB
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Guild yeDungeoneering, iyo nyowani RPG inogara pane iyo App Store
Pangu anovimbisa kuburitsa jailbreak yeIOS 9.3.3 munguva pfupi iri kutevera, "on-demand jailbreak"